Hobby | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ny panty ho an'ny lehilahy miaraka am-bovoka amin'ny fanahy
Tianao ho tsapan'ny olon-tianao ve ny fikarakaranao, na dia lavitra anao aza izy ireo? Hahatsapa ny hafanao amin'ny vatanao? Aza hadino ny manamboatra akanjo ba akanjo ho azy. Akanjo akanjo ba misy lehilahy miaraka amin'ny serfa, natolotra amina olon-tiana iray, ...
Lalao Munchkin: fitsipika
Fantatsika rehetra ny mety ho lalao kilalao mahafinaritra. Any Russia, ny lalao board "Monopoly" no mitana ny toerana voalohany amin'ny lazany. Eo amin'ny laharana faharoa ny lalao board "Munchkin", izay lalaovina amin'ny fahafinaretana ...
Avy amin'ny modules: voninkazo. Avy amin'ny modular vita
Ny origami modular dia mandrakotra lohahevitra maro samihafa. Ny voninkazo, biby, fiara, tranobe dia azo atao amin'ny taratasy. Ny safidy dia lehibe tokoa. Origami avy amin'ny modely Flower dia fanampin-javatra mahafinaritra ho an'ny efitrano anatiny rehetra. Toy izany ...
Vokatra metaly DIY: endri-javatra, karazana ary sary
Amin'ny toe-javatra maoderina, rehefa tototry ny vokatra novokarina betsaka ny tsena, dia mitaky filàna hatrany ny asa-tanana. Any an-tanàna dia manomboka miseho ny departemanta manokana sy ny fivarotana na salon iray, amarotana ...
Ahoana ny hilalao chess? Fitsipika «Chess»
Raha vao jerena dia toa mora ny mianatra milalao chess fa raha ny tena izy dia mila ezaka be dia be ary mitadidy fitsipika fototra vitsivitsy. Tantaran'ny tranga niseho ...
Fanjaitra fampiasa «Shell» ho an'ny openwork: paika sy famaritana
Ny lace dia manome pesona manokana ireo entana voadona. Izany no mahatonga ny mpanao asa-tanana miezaka ny hahafehy fampiasa openwork maro araka izay azo atao. Safidy azo antoka ity amin'ny fanaingoana akanjo, na inona na inona vanim-potoana. Ao amin'ny lahatsoratra dia hodinihintsika ny fomba mety ...
Ahoana ny fomba handravaka kapa amin'ny tananao. Ahoana ny handravaka kapa amin'ny zazalahy sy zazavavy
Manaiky fa tsy ny kiraro, na dia ny kiraro faran'izay tsara kalitao aza, no hanafana ny tongotr'ireo zanakao amin'ny fanala amin'ny ririnina noho ny baoty mahazatra. Izay mihitsy ny mahazatra. Ary tena tiako ny tongotr'ilay zaza ...
Ahoana ny fanamboarana palitao volony amin'ny volonao voajanahary?
Ny palitao mink dia manintona fitafiana izay, angamba, ny vehivavy rehetra te hanana. Ny vokatra vita amin'ny volom-borona voajanahary dia nankasitraka hatrany ary tamin'ny lamaody. Arakaraky ny mahalasa lafo ny zavatra iray no mila itehirizana azy. ...
Atelier amin'ny Taom-baovao ao an-trano: akanjo vita amin'ny Snow Queen
Ny Taom-baovao dia fialantsasatra mahafinaritra. Tsy mitovy amin'ny atmosfera majika fotsiny izy io, tsy amin'ny fiandrasana fifaliana sy fanantenana fanomezana ihany, fa koa ny fahafaha-mitafy akanjo karnavaly tsy mahazatra, mba ho zatra ny endrik'izany ...
Hevitra tsara indrindra. Ahoana ny fomba hahitana fa ny sary-tena-tena no avo lenta indrindra?
Androany, ny sary nakan'ny tena tamina fakantsary fakan-tsarimihetsika dia nanjary karazana malaza kokoa noho ny sary ara-javakanto. Raha mila makiazy tonga lafatra ianao, taovolo tsara tarehy ary kojakoja mahaliana ho an'ny fitifirana avo lenta, afaka maka selfie ianao ...
Ahoana ny fomba manjaitra akanjo Peppy Long stocking amin'ny tananao?
Nanjary nalaza ilay zazavavy volo mena mamirapiratra taorian'ny fakana sary andiana boky iray nataon'ny mpanoratra soedoà. Ary tsy mahagaga raha maro ny ankizy no misafidy an'ity sary manokana ity ho akanjo fanaovana karnavaly. Famirapiratana sy fahatsorana ...
Hevitra mahaliana ho an'ny sary amin'ny lohataona
Indraindray dia toa ny fararano no fotoana tokony halahelo sy hidiana ao amin'ny efitranonao, nofonosina lamba firakotra volon'ondry mafana miaraka amina boky na dite eny an-tananao. Saingy tsy tokony hijery an'ity orana ity ianao indraindray ary ...
Ahoana ny fomba fanaovana dodecahedron amin'ny tananao?
Ny dodecahedron dia tarehimarika telo lehibe tsy mahazatra izay ahitana tarehy mitovy 12, izay samy pentagon mahazatra. Mba hanangonana dodecahedron amin'ny tananao manokana, dia tsy ilaina velively ny fananana fahaiza-manao 3D manokana ...
Ahoana ny fanaovana fihodinana vita amin'ny taratasy amin'ny tananao
Ny taratasy angamba no fitaovana mora azo indrindra izay mahafinaritra foana ny miasa. Azonao atao ny manamboatra asa-tanana Origamiera, karatra paositra, voninkazo, vatosoa, vorona, biby ary maro hafa avy aminy. Diniho ny fomba fanaovana vorombola avy amin'ny ...
Ahoana ny fomba hanaovana elatra "manidina" amin'ny masquerade sy amin'ny fiainana?
Ao amin'ny klioba maoderina dia mitazona akanjo masquerade sy fety misy lohahevitra maromaro. Fa ny akanjo karnavaly dia mahasoa tsy ho azy ireo ihany. Betsaka amintsika no mankafy mandray anjara amin'ny sary, mamorona tena tsy mahazatra, ...
Inona no azonao atao manamboatra taratasy amin'ny tananao?
Ny famoronana taratasy indray mandeha dia nahatonga ny tena revolisiona, satria nahafahana nanary ny fampiasana hoditra hoditra io. Noho io dia nitombo ny isan'ny boky, ary nanjary azon'ny olona maro kokoa ny fahalalana. Efa ...
Ny antsipirihany momba ny fomba fametrahana alika ao amin'ny zipper
Androany dia holazainay aminao ny fomba fampidirana alika ao anaty zipper. Ity fanontaniana ity dia mety misy ifandraisany amin'ny antony maro: ny alika dia afaka vaky, ho very na hitsambikina hiala ny lalamby. Matetika ny vokatra iray izay misy ...
Aiza ary amin'ny fomba ahoana no hanangana jiro lanitra?
Ny jiro eny amin'ny lanitra dia fantatra amin'ny anarana isan-karazany, izay antsoina hoe "Sinoa" sy "baolon'ny filana". Inoana fa alohan'ny hamoahana ny firafitra misy domed amin'ny lanitra dia ilaina ny manoratra ny anao ...
Mpanao asa maivana: sary sy sary. Mianatra manamboatra asa-taratasy miaraka amina ankizy
Ny taratasy dia fitaovana miavaka amin'ny famoronana. Ankafizin'ny ankizy ny fananany: potipotehina, potipotehina, arakaraka ny fitaoman'ilay hety, ovay ny takelaka fisaka ho olo-telo refy noho ny famoronan ...
Manjaitra kitapo tsapanay izahay
Vao tsy ela akory izay, ny vokatra isan-karazany avy tsapa sy tsapa dia nanjary nalaza hatrany. Ny zavatra noforonina avy amin'ireo fitaovana ireo dia miavaka amin'ny fampiononana manokana sy ny fisehoany tsara tarehy. Hianaranao amin'ity lahatsoratra ity ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 43 Next Page
62 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,191.